Taxanaha Apple Watch 4 wuxuu leeyahay batari 20% kayar laakiin wuxuu socdaa ilaa 18 saacadood maalintii | Wararka IPhone
Taxanaha Apple Watch 4 wuxuu leeyahay batari 20% kayar laakiin wuxuu socdaa ilaa 18 saacadood maalintii
Sidii aan maalmahan kuu sheegnay, ayaa Taxanaha Apple Watch 4 wuxuu u badan yahay aaladda ugu xiisaha badan dhammaan kuwa la soo bandhigay Qeybta ugu dambeysa ee Sebtember 12. Taxanaha Apple Watch 4 ee aan tijaabineyno si aan u helno dhammaan riwaayadahaas cusub ee ay ku dhex qarsooneyso.
Iyo wiilasha iFixit, sidii caadiga ahayd, waxay ku dhiiradeen inay kala furfuraan barnaamijka cusub ee Apple Watch Series 4, hawlgal noo na soo bandhigey xog gacan-bilow ah oo aad u wanaagsan tan iyo intii aysan jirin wax ka fiican aragtida waxa dhab ahaan ku jira aaladda. Thanks to this waxaan helnay wax lala yaabo: ah Taxanaha Apple Watch 4 wuxuu leeyahay batteri ka awood yar qaabkii hore. Boodka ka dib waxaan ku siineynaa dhammaan faahfaahinta warkan, laakiin waxaan horeyba kaaga digayaa: ha ka welwelin farqiga u dhexeeya bateriga ...
Gaar ahaan, Taxanaha Apple Watch 4 44mm waxaad leedahay qiyaastii 16.5% awood ka yar marka loo eego qaabkii weynaa ee hore, 3mm Apple Watch Series 42. Dhinaca kale, moodeelka cusub ee Apple Watch Series 4 40mm wuxuu leeyahay qiyaastii 19.7% kayar awoodda batteriga ka badan 3mm Apple Watch Taxanaha 38 hore. Iyada oo ay waxaas oo dhami jiraan, kuwan cusub Taxanaha Apple Watch 4 wuxuu leeyahay batteri gaaraya 18 saacadood maalintii, isla saacadihii uu Apple Watch Series 3 gaadhay.
Sideed ugu guuleysan kartaa tan awood batteri yar? way fududahay, cusub 'LTPO' ayaa soo bandhigaya waxtarka tamarta wanaagsan ee qalabka. Sida processor-ka cusub Apple S4 waxaa loo dhisay sidii "dhan" taas oo ka dhigaysa mid aad waxtar u leh sidaas darteedna isticmaalka batteriga ka yar. Marka ha ka welwelin in kuwan cusub ee Apple Watch Series 4 ay leeyihiin batteri ka yar, aaladdu waxay noqon doontaa mid wax ku ool ah oo ku xiran isticmaalka aad samayso waxay yeelan doontaa madax-bannaani badan ama ka yar illaa 18 saacadood maalintii (xitaa way ka badnaan kartaa iyaga).
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Taxanaha Apple Watch 4 wuxuu leeyahay batari 20% kayar laakiin wuxuu socdaa ilaa 18 saacadood maalintii
Waxaan u maleynayaa in nolosha batteriga ee qalab kasta oo ay tahay inaan horey u qaadanay. Waxaan ka qaadaa iPhone-kayga iyo Apple Watch-kayga hal mar maalintii haa ama haa. Waxba igama gelin haddii ay sii socoto maalin iyo badh ama haddii awooddu hoos u dhacday. Waxay u egtahay dhaqan. Maaddaama aanan waligey u oggolaanin saacaddu inay gaarto ugu yaraan, nus saac ka yar ayaan si buuxda u rartay. Iyo taleefanka gacanta, inta aan daawado TV-ga ama seexanayo, kharash. Uma arko dhibaatada intaa leeg ...
Ma fahmin waxa loola jeedo 18 "saacadood maalintii".
taasi waxay socotaa 18 saacadood oo la isticmaalo? yacni subaxda ilaa habeenka?
Taasi waxay socotaa 18 saacadood maalin kasta? imisa maalmood?
Ma aqaano haddii midkoodna uu la kulmayo wax la mid ah aniga, waxaan ka soo baxay walaaca Sergi ee uu batterigu igu sii waday maalintii oo dhan, xitaa haddii aanan tababbarin wuxuu socday maalin iyo badh. Akhriso oo saddexda la siiyay xaaskeyga aniga ayaa iibsaday afarta.
Midkani ma imanayo 3:00 galabnimo, aniga oo igu dhejinaya 8 ama 9:00 subaxnimo. Muddada ugu dheer ee aan ku guuleystey inay i sii socoto waa 4:00 galabnimo, taasna waxay isku dayeysaa inaanan la istcimaalin, iyadoo la baabi'inayo ogeysiisyo badan iyo tababar la'aan. Ma aqaano inay tahay cillad gaar ah oo warshadaydu leedahay. Waxaan dib ugu celiyey goobihii warshadda, oo aan kala bixin oo aan wax walba ka soo bilaabay sidii ay u ahayd saacad cusub oo cusub oo haddana isla dhibaatadii oo kale leh. Iima sii socoto wax ka badan toddobo saacadood
Ku jawaab Carlos Rivero
Qoraal la saxay:
Ma aqaano haddii midkoodna uu la kulmayo wax la mid ah aniga, waxaan ka soo baxay taxanaha 3 ee uu batterigu ku sii socdo maalintii oo dhan iyo xitaa haddii aanan tababbarin waxay socotaa maalin iyo badh. Waxaan siiyay 3dan xaaskeyga waxaanan iibsaday Taxanaha 4.
Midkani ma imaanayo 3:00 galabnimo, isaga oo dhigaya 8 ama 9:00 subaxnimo. Muddada ugu dheer ee aan ku guuleystey inay ila sii socoto waa ilaa 4:00 galabnimo taasna waxay isku dayeysaa inaanan u adeegsan, baabi'inta ogeysiisyo badan iyo tababar la'aan. Ma aqaano inay tahay cillad gaar ah oo warshadaydu leedahay.
Waxaan dib ugu celiyey goobihii warshadda, oo aan kala bixin oo aan wax walba ka soo bilaabay sidii ay u ahayd saacad cusub oo cusub oo haddana isla dhibaatadii oo kale leh. Waxba igama dhimayso in ka badan toddobo saacadood oo heegan ah.
Wax la mid ah ayaa igu dhaca aniga, waxaan helay laba maalmood ka hor waxayna igu dhacdaa si isku mid ah mana ogi inay caadi tahay iyo waxa la qabanayo
IOS 12.1 beta 1 waxay awood u siineysaa eSIM on iPhone XS iyo iPhone XS Max